पार्ट टाइम कामका लागि फोन गर्दा कुरा गर्ने तरिका – NESAJ
जापान आएको लामो समय होस् या भर्खरै आएको बेला होस्, विशेषगरि विद्यार्थी र डिपेन्डेन्ट भिषामा आउने र पार्ट टाइम काम गर्न चाहानेले काम पाउनका लगि सम्बन्धित कम्पनी वा म्यानेजरलाई एकपटक फोन गर्नैपर्ने हुनसक्छ । जापान आएको सुरुवाती समयमा भाषाको राम्रो ज्ञान नहुने र जानेपनि बोल्नका लागि आत्मविश्वासको कमी हुँदा राम्रा अवसरहरु पनि गुम्न सक्छन् । आजको पोष्टमा हामी जापानमा पार्ट टाइम काम गर्नका लागि फोन गर्दा हुने कुराकानीमा प्रयोग हुने भाषागत शव्दावलीहरु र संवादका वारेमा जानकारी दिंदैछौं । आशा छ यो जानकारीले जापान आउने तयारी गरिरहेका र जापानमा आएर पार्ट टाइम काम खोजिरहेका साथीहरुलाई केही न केही सहयोग पुग्नेछ । फोन गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुहोला : – तपाईले पार्ट टाइम जबको लागि फोन गर्नु अघि कुनै वेबसाइट अथवा किताब हेरेर फोन गर्न लाग्नु भएको हो भने किताब/वेबसाइटमा उल्लेखित कामको प्रकार, काम गर्ने ठाँउ, कामको तलब र गाडी भाडा दिन्छ वा दिदैन राम्रोसँग बुझेर मात्रै फोन गर्नुहोला । – कलम र नोट साथमा लिएर फोन गर्नुहोला । – तपाईंले आबेदन दिन लाग्नु भएको काम अझै छ या छैन बुझ्न जरुरी छ । – अन्तर्वार्ता लागि मिति निश्चित गर्नुहोला । – अन्तर्वार्ताको लागी स्थान र तपाईलाई ल्याउन आवश्यक चिजहरुको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुहोला । – फोनमा जापानी नम्र भाषा प्रयोग गर्नुहोला । – ..र अन्त्यमा फोन कहिल्यै पनि पहिला तपाईले नराख्नुहोला । संवादको उदाहारण फोन बज्छ….
相手(आइते) – फोन उठाउने मान्छे：はい、abc会社です。 (हाइ, abc खाइस्या देस्) -यो abc कम्पनी हो ।
あなた(आनता) – तपाई： ニホンdeバイトの求人をみて電話しました。ラムと申します。 (निहोन् दे बाइतो नो क्यिुजिन वो मिते देन्वासिमासिता। रामु तो मोसिमास) – मैले निहोन् दे बाइतोको जब साइट हेरेर फोन गरेको हुँ । मेरो नाम राम हो ।
あなた(आनता) – तपाई: 採用(さいよう)のご担当者様(ごたんとうしゃさま)をお願いできますでしょうか？ (साइयोउ नो गोतानतोउस्यासामा वो ओनेगाइदेकिमास्देस्योउका ?) – के तपाईं पार्ट टाइम जब नियुक्त गर्ने प्रतिनिधिलाई फोन दिन सक्नुहुन्छ ?
相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे：はい、採用担当者(さいようたんとうしゃ)は私です。 (हाइ,साइयोउतान्तोउस्या वा वातासी देस् ) – हजुर , म नै पार्ट टाइम जब नियुक्त गर्ने प्रतिनिधि हुँ ।
あなた(आनता) – तपाई：船橋居酒屋(ふなばしいざかや)店のホールスタッフのアルバイトに応募したいです。まだ募集はしていますでしょうか。 (फुनाबासीइजाकाया तेन् नो होरु सुताप्पु नो आरुबाइतो नि ओउबोउसिताइ देस्,माता बोस्युउ वा सिते इमास्देस्योउका) – फुनाबासीइजाकाया तेन्को पार्ट टाइम जबको लागि निबेदन दिन चाहान्छु , अझै त्यो काम छ र ?
相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे：はい、募集しています。 (हाइ बोस्युउसिते इमास) – हजुर , अझै ख़ाली छ ।
あなた(आनता) – तपाई：面接をお願いできますでしょうか？ (मेन्सेचु वो ओनेगाइदेकिमास्देस्योउका?) – के तपाई मलाई अन्तर्वार्ता लिन सक्नुहुन्छ ?
相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे：はい、いつ頃がいいですか？ (हाइ, इचुगोरो गा इइ देस्का ?) – हुन्छ , तपाई कहिले चाहनुहुन्छ?
あなた(आनता) – तपाई：来月の一日の17時から20時の間、二日は13時以降でしたら、大丈夫です。 (राइगेचु नो चुइताची नो 17 जी कारा 20 जी नो कान,फुचुका वा 13 जी इकोउ देस्तारा, दाइज्योबु देस्।) – अर्को महिनाको १ गते बेलुका ५ बजे बाट ८ बजे भित्र, २ गते दिउँसो १ बजेबाट जति बेला पनि अन्तर्वार्तामा आउनसक्छु ।
相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे：では、来月の一日の19時はどうですか？ (देवा, राइगेचु नो चुइताची नो 19जी वा दोउ देस्का? ) – त्यसो भए , अर्को महिना १ गते राती ७ बजे अन्तर्वार्ता लिदाँ कस्तो हुन्छ ?
あなた(आनता) – तपाई ：はい、来月の一日の19時でお願い致します。 (हाइ, राइगेचु नो चुइताची नो 19 जी दे ओनेगाइइतासिमास) – हजुर , अर्को महिना १ गते रातीको ७ बजे अन्तर्वार्तामा आउँछु ।
あなた(आनता) – तपाई：面接当日に持参するものは何かありますでしょうか？ (मेन्सेचुतोउजिचु नि जिसानसुरु मोनो वा नानीका आरीमास्देस्योउका ?) – अन्तर्वार्तामा आउँदा लिएर आउनु पर्ने चीजहरु के के होला सर/मेडम?
相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे：はい、写真付きの履歴書(りれきしよ)をお願いします。 (हाइ,स्यासिनचुकी नो रिरेकिस्यो वो ओनेगाइसिमास।) – हजुर , फोटो टासेर पार्ट टाइम जबको निबेदन लिएर आउनुहोला ।
あなた(आनता) – तपाई：写真付きの履歴書ですね。当日はどこに伺えばよろしいでしょうか？ (स्यासिनचुकी नो रिरेकीस्यो देस्ने.,तोउजीचु वा दोको नि उकागाएबा योरोसिइ देस्योउका?) – फोटो टासेर पार्ट टाइम जबको निबेदन लिएर आउँछु । अन्तर्वार्ताको दिन कता आएर सोध्दा ठीक हुन्छ सर/मेडम ?
相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे : 来月一日18時50分に山田ビルの2階でお願いします。受付でアルバイトの面接にいらっしゃったとお伝えいただければ、私が伺います。 (राइगेचु चुइताची 18 जी 50 फुन् नी यामादा बिरु नो2खाइ दे ओनेगाइसिमास्. उकेचुके दे आरुबाइतो नो मेन्सिचु नी इरास्यात्ता तो ओचुताएइतादाकेरेबा,वातासी गा उकागाइमास) – अर्को महिना १ गते ६ बजे ५० मिनेटमा यामदा भवनको दोस्रो तलामा आउनुहोला । काउण्टरमा पार्ट टाइम जबको लागि आएको हुँ भन्नुहोला , त्सपछि म आउँछु ।
あなた(आनता) – तपाई：当日のご連絡先を教えていただけますでしょうか？ (तोउजिचु नो गोरेनराकुसाकी वो ओसिएत्ते इतादाकेमास्देस्योउका ?) – सोही दिनको लागि फोन नम्बर दिन सक्नुहुन्छ ?
相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे : はい、採用担当のハリ、090－△△△△ー△△△△です。大丈夫ですか。 (साइयोउतान्तोउ नो हारी , 090－△△△△ー△△△△देस् ,दाइज्योबु देस्का .) – पार्ट टाइम जब नियुक्त गर्ने प्रतिनिधि हरी ज्युको फोन नं 090－△△△△ー△△△△ ले हुन्छ ? )
あなた(आनता) – तपाई : 復唱いたします。ハリ様、電話番号は090－△△△△ー△△△△ですね。 (फुकुस्युउइतासिमास, हारीसामा, देन्वाबान्गोउवा 090－△△△△ー△△△△ देस्ने.) – फेरी एकपटक भन्छु , हरी सरको नम्बर 090－△△△△ー△△△△ हो ।
相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे：はい、間違いありません。 (हाइ, माचिगाइआरिमासेन् ) – हजुर त्यही हो ।
あなた(आनता) – तपाई : では、よろしくお願いいたします。お忙しいところ、どうもありがとうございました。 (देवा,योरोसिकुओनेगाइइतासिमास. ओइसोगासिइ तोकोरो, दोउमो आरिगातोउ गोजाइमास्) – तपाईको ब्यस्तताको बाबजुद मलाई समय दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ।]
相手(आइते)- फोन उठाउने मान्छे：こちらこそ、お電話ありがとうございました。失礼いたします。 (कोचीराकोसो , ओदेन्वा आरीगातोउ गोजाइमासिता, सिचुरेइसिमास्) – हजुरलाई पनि फोन गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ।（カチャン～♪)
※ फोन उठाउने मान्छेलाई पहिला फोन राख्न दिनुहोस् अनि बल्ल तपाईले राख्नुहोला । सबै ठाउँमा कामका लागि फोन गर्दा माथि उल्लेखित झै गरि दुरुस्तै संवाद नहुन पनि सक्छ तर कामका लागि पहिलोपटक फोन गर्दा प्रयोग हुने वाक्य र संवाद लगभग यस्तै हो । कोही साथी वा चिनजानका व्यक्तिमार्फत सम्पर्क नंबर पाउनुभएको हो भने पनि फोनमा सो कुरा खुलाउनुपर्छ । आँफुले के कामका लागि एप्लाई गर्न लागेको हो सोही अनुसार उपयुक्त समय छानेर फोन गर्नु ठीक हुन्छ जस्तै रेष्टुरेन्टको कामका लागि हो भने लन्च टाइम र बेलुकीको समय भन्दा बाहेकको समयमा फोन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सबैभन्दा उपयुक्त समय भनेको विहान १० देखि ११ः३० र दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्मको समय मानिन्छ । फोन गर्दा फरासिलो पाराले पूर्ण आत्मविश्वास सहित गर्न सक्नुभयो भने अन्तवार्तामा बोलाउने सम्भावना बढि हुन्छ । फोन गर्दा होहल्ला भएको ठाउँबाट नगरि कोठाभित्र वा शान्त ठाउँमा भएको बेला गर्नुपर्छ । यि कुरामा ध्यान दिनुभयो भने अन्तवार्तामा बोलाउने सम्भावना बढि हुन्छ । अन्तवार्तामा बोलाएर जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको वारेमा विस्तृत जानकारीका लागि भने यो पोष्टमा क्लिक गरि पढ्न सक्नुहुन्छ ।
जापानमा घुमघामका लागि निस्कँदा काम लाग्ने १९ वाक्यांशहरू